ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အား စနစ်တကျ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးပြုလုပ်ရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် ဥပဒေပြုကောင်စီ(LegCo)အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် အစီအစဉ်တကျ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ ယင်းရွေးကောက်ပွဲ ပျက်ပြားစေရန် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် ဟောင်ကောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင် အချို့သောနိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန် လမ်းဟောင်းအတိုင်းလွှမ်းမိုးနိုင်အောင် ထပ်တလဲလဲပြောဆိုမှု အချိန်ဖြုန်းရန်မှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း သိရသည်။
အချက်အလက်များအရ မဲရုံစတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်ကတည်းက မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးမှ မဲဆန္ဒရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒမဲကို တက်တက်ကြွကြွလာရောက်ထည့်နေကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း ကောင်းမွန်စွာ အစီအစဉ်တကျ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ၊ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ကောင်းမွန်သောဥပဒေ နှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ရန် ထုတ်ဖော်ပြသလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက်ဥပဒေပြုကောင်စီရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးရန် တန်းစီစောင်းဆိုင်းနေကြသူများကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သို့သော်လည်း ဟောင်ကောင်တွင် တည်ငြိမ်မှု နှင့် အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုကို မတွေ့မြင်လိုသော မလိုလားသော အချို့ ပြည်ပအင်အားစုများသည် အသံတိတ်နေရန် ငြင်းဆိုးနေခဲ့ကြသည်။ သွားပုပ်လေလွင့်ပြောဆိုခြင်း နှင့် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးပြုခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ အခွင့်အရေးကို အသုံးပြုရန်မှာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ချီတုံချတုံဖြစ်မနေကြပေ။
၎င်းတို့ပြောဆိုပြုမူချက်များသည် ဆက်စပ် ဥပဒေများ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ဟောင်ကောင်ဒေသအား ဟောင်ကောင်ပြည်သူများက ကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရန်သေချာခိုင်မာစေသည့် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းမှေးမှိန်စေရန် အမှန်တကယ်အားထုတ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အဆိုပါအင်အားစုများသည် ၎င်းတို့၏ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးအစီအစဉ်များကို မည်သို့ပင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစေကာမူ အစီအစဉ်တကျ ကျင်းပပြုလုပ်နေသည့် ယခုရွေးကောက်ပွဲကို ၎င်းတို့အနေဖြင့် မည်သည့်အခါမျှ တားဆီးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သလို ဒီမိုကရေစီ နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဦးတည်ချီတက်နေသည့် ဟောင်ကောင်ကို လုံးဝရပ်တံ့ပစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Smearing no way to impede orderly process of HKSAR’s LegCo election
BEIJING, Dec. 19 (Xinhua) — As the election for the seventh-term Legislative Council (LegCo) of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) is underway orderly on Sunday, certain foreign organizations including Hong Kong Watch have wasted no time in repeating their old rhetoric, in an attempt to smear the event.
Asamatter of fact, since polling stations opened, voters from all constituencies have actively cast their ballots while the process has been in good order, ushering inanew chapter of good law and good governance in the HKSAR.
However, some foreign forces, who do not want to seeastable and prosperous Hong Kong, have refused to stay quiet. They have no qualms about using every possible chance to do smearing and sabotaging.
What they have said and done is exactly an effort to tarnish an election that complies with related laws and regulations, and that truly ensures the rule of the HKSAR by the Hong Kong people.
No matter how those forces are going to carry on with their smearing campaign, they will never succeed in preventing this election from being held in an orderly fashion, not to mention stopping Hong Kong marching forward on its path towards democracy and the rule of law.
Voters wait to cast ballot atapolling station in Whampoa, south China’s Hong Kong, Dec. 19, 2021. (Xinhua/Wang Shen)
ဟောင်ကောင်၏ သတ္တမအကြိမ် ဥပဒေပြုကောင်စီရွေးကောက်ပွဲတွင် တက်ကြွစွာမဲပေးကြရန် ကယ်ရီလမ်းတိုက်တွန်း